ဝါရင့် စာနယ်ဇင်းသမားဆိုတာ တဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ၀ါရင့် စာနယ်ဇင်းသမားဆိုတာ တဲ့
၀ါရင့် စာနယ်ဇင်းသမားဆိုတာ တဲ့
Posted by လင်းဝေ on Jun 21, 2010 in News |2comments
အောက်က စာကလေးက လည်း မေးလ်ထဲ ကိုပို့လာတာပါ။ သူကိုယ်တိုင်ကြုံလာတာကို ပို့လာတာပါ၊ ပို့လာတဲ့သူကတော့ ဆွေမျိူးအရင်းခေါက်ခေါက်ကြီး နောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း အတူတူ ၀ိုင်းနေကြဆိုတော့ မှန်တယ်ဆိုတာ ထောက်ခံပါတယ်။
( ၁၇.၆.၁၀ ) နေ.က ပုဇွန်တောင်-ဗိုိလ်ချုပ်လမ်းမ ပေါ် ၅၁-လမ်းထိပ်တည့်တည့်မှာရှိတဲ့ Woody House ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်မှာ ဂျာနယ်တစ်ခုက ဒု-အယ်တီတာချုပ်ဖြစ် တဲ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ.ထိုင်ပြီး ဘီယာသောက်ရင်း အာဂျင်တီးနားနဲ. တောင်ကိုရီးယား တို.ရဲ. ဘော်လုံးပွဲကို ထိုင်ကြည်.နေခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်ထဲမှာတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း တိုက်ဂါးဘီယာက Promotion Girl လေးက ဘီယာသောက်သူတွေကို လက်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ.လဲလှယ်ရမယ့် ကူပွန်ကဒ်ပြားပေါ်မှာ စတစ်ကာလေးတွေလိုက်ကပ်ပေးနေပါတယ်
ဒီနေရာမှာ ဘီယာမသောက်တတ်သူတွေနဲ. ပြင်ပကလူတွေနားလည်အောင် တိုက်ဂါးဘီယာရဲ.World Cup Promotion ပုံစံကို ရှင်းပြချင်ပါတယ် ။ promotion ကဒ်ပြားလေးတစ်ကဒ်ပေါ်မှာ sticker ကပ်ဖို. ကွက်လပ် ( ၁၀ ) ခုပါပါတယ်။ တိုက်ဂါးစည်ဘီယာ ၂ ခွက် (သို. ) ပုလင်း ၁ လုံး သောက်ရင် ခုနပြောတဲ. Promotion Girl လေးတွေက sticker ၁-ခုကပ်ပေးပါတယ်။ ကဒ်ပြားတစ်ခု ပြည့်ဖို. sticker ၁၀-ခုလိုတယ်ဆိုတော့ စည်ဘီယာခွက် ၂၀-သောက်ရမယ့်သဘောပါ။ ( ဒီကိစ္စမှာ စည်ဘီယာနဲ.ပဲဆိုင်လို. ပုလင်းကိုထည့်မပြောတော့ပါဘူး )ကဒ်ပြားတစ်ခုပြည့်ရင် တီရှပ်တစ်ထည်ရပါတယ်။ ၄ ကဒ်ဆို ဘော်လုံးသမားပုံတူအရုပ်တစ်ရုပ်၊ ၆ ကဒ်ဆိုရင် လက်ပတ်နာရီတစ်လုံး ပေးပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းဆက်ပါ့မယ်………
အာဂျင်တီးနား နဲ.တောင်ကိုရီးယားပွဲ ပြီးလို.နောက်တစ်ပွဲ စောင့်နေချိန်မှာပဲ ဆိုင်ကောင်တာ မှာ ပြသနာတစ်ခုတက်နေတာလှမ်းတွေ.နေရပါတယ်။ အတူရှိနေတဲ့သူငယ်ချင်းက ” ပြသနာတက်နေတာ..ဆရာချစ်စံဝင်းနဲ.ဆရာမောင်သွေးသစ်ပဲ ..ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဗျ” လို.ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ. ကျနော်လဲ ကောင်တာနဲ.မလှမ်းမကမ်း ကနေ သွားအကဲခတ်ပါတယ် ။
အဲဒီမှာ ကောင်တာထိုင်နေတဲ့လူလတ်အရွယ်အမျိုးသားက ” ခင်ဗျား အဲဒီလိုမခြိမ်းခြောက်နဲ.လေ..ခင်ဗျားတို.မကျေနပ်ရင် သူတို.ကုမဏီကိုရေး…ကျုပ်တို.ဆိုင်နာမယ်ထည့်ရေးစရာမလိုဘူး ” လို.ပြောတာကြားရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာချစ်စံဝင်း က ” ဒါခင်ဗျား တို.ဆိုင်မှာဖြစ်တာ..ခင်ဗျားတို.ရှင်းပေးရမယ်..” လို.ပြန်ပြောပါတယ်။ ကောင်တာကလူကလည်း..” ရှင်းပေးဆိုရှင်းပေးမယ်..ဒါပေမယ့်ခြိမ်းခြောက်တာတော့လက်မခံဘူး..” လို.ပြောပါတယ်..အဲဒီမှာ ကောင်တာကလူရဲ.မိန်းမက၀င်တောင်းပန်ပြီး ကောင်မလေးကိုလဲအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးလိုက်ဖို. နားချပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကောင်မလေးက တရှူံ.ရှူံ.ငိုနေတဲ့ကြားက sticker တွေထုတ်ကပ်ပေးပါတယ်။ ကဒ်ပြား ပြည့်သွားတော့ ချစ်စံဝင်းက ” ဘယ်မှာလဲအင်္ကျီလို. ” ခပ်မာမာတောင်းပါတယ်။ ကောင်မလေးကလဲ တီရှပ်တစ်ထည်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို.ကျေနပ်ပြီးပြန်ထွက်သွားမှ promotion Girl ကောင်မလေးနဲ. စားပွဲထိုးကောင်လေးတွေကို အဖြစ်အပျက်အစုံအလင်မေးကြည့်တော့………သူတို.ကလာထိုင်သောက်တယ်။ ကောင်မလေးက စတစ်ကာတွေကပ်ပေးနေတယ်။ ကောင်မလေးကစ ကပ်မပေးခင်ရှင်းပြတာလဲသေချာနားထောင်ပုံမရဘူး ၊ အဲဒီနောက် သူတို. ( ၃ )ယောက် ( နောက်တစ်ယောက်ကလည်း ချစ်စံဝင်းနဲ.လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဂျာနယ်လောက ကပဲလို.သိရပါတယ် ၊ နာမည်မမှတ်မိပါ ) သောက်ပြီးသွားတော့ ကောင်မလေးကို ခေါ်ပြီး စတစ်ကာတွေပြကာ အင်္ကျီတောင်းပါတယ်။ သူတို.သောက်ထားတာ စုစုပေါင်း ( ၁၅ ) ခွက်ပဲရှိပါတယ် ၊ ကောင်မလေးက ကဒ်ပြားပြည့်မှပေးလို.ရမယ် ရှင်းပြတာကိုလက်မခံပဲ အင်္ကျီမပေးရကောင်းလားဆိုပြီး ကောင်တာကလူတွေကိုပါ..စာနယ်ဇင်းကဘာညာ..ထည့်ရေးလိုက်လို. နာမည်ပျက်သွားမယ် စသဖြင့် ပြောဆိုပြီး စည်းကမ်းချက်နဲ.မညီတာကိုတောင်းဆိုတာပါ။ တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေပါ ။ အသက်လဲကြီးပါပြီ။ချစ်စံဝင်း ဆိုတဲ့လူဆိုရင် ဆံပင်တောင်တစ်ခေါင်းလုံးဖြူနေပြီ။ ဘာမဟုတ်တဲ့ တီရှပ်လေးတစ်ထည် အတွက် ပြသနာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကြားမကောင်းပါဘူး ဒီအသက်အရွယ်ကြီးနဲ.။ဒါထက်ပိုဆိုးတာက စာနယ်ဇင်း ဆိုပြီးအစွယ်ထုတ်ပြတာ..။ ဘီယာ ကြော်ငြာတီရှပ်မရလို. စာနယ်ဇင်း ၀ိတ်သုံးတာ ကောင်းပါရဲ.လား ။ တကယ်ဆို နောက်တက်ဂျာနယ်လစ် လူငယ် တွေက လုပ်နေရင် သူတို.ကဆုံးမ ရမှာပါ ၊ အခုတော့…ကျနော့်သူငယ်ချင်း ဂျာနယ်လစ် လူငယ်က သူတို.အစားရှက်လို.ပုန်းနေရတယ် ။ ကျနော်တို. ဘယ်လိုလူတွေကိုလေးစားရတော့မှာလဲ ။
သူတို.နဲ.ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဘာပြသနာမှမရှိပေမယ့် စာနယ်ဇင်း ကဆိုပြီးလူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာ မခံနိုင်လို.တင်ပြလိုက်တာပါ။
ယုံရမလား…မယုံရမလားမသိတော့ပါဘူး။ နာမည်ကျော်တစ်ယောက်ပဲ။ သူ့စာမဖတ်ဖူးပေမယ့် နာမည်တော့ သိနေတယ်…
ခုလိုကိစ္စမျိုးတွေများစွာကို စာနယ်ဇင်းလောကထဲမှာ တွေ့ကြုံနေရတာရှိပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းစုန်းပြူးတွေလို့ ပြောရမှာပါ။ အဲလိုစုန်းပြူးဖြစ်နေသူတွေဟာလည်း မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေထဲက ရှုားပါတယ်။ လူကြီးပိုင်းတွေထဲက အများစုကို ကျွန်တော်လည်းကြုံဖူးပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတစ္ဆေတွေ(ခေတ်ဆွေးစာနယ်ဇင်းသမားယောင်ယောင်တွေ)လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေကြောင့်လည်း စာနယ်ဇင်းလောက နာမည်ပျက်နဲ့ကြုံကြရတာပါ။ စာနယ်ဇင်းလောကထဲမှာ ချဉ်ဖတ်တစ်ယောက်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ အခမ်းအနားပွဲတွေ၊ စာနယ်ဇင်းပွဲတွေ၊ ဖျော်ဖြေရေးပွဲတွေကို ဂုတ်စီးလုပ်စားနေတဲ့ စာနယ်ဇင်းဘိုးအေကြီးလို့ သူ့ကိုသူ ခံယူထားသူတစ်ယောက်ပါ။ အဲလိုလူတွေကြောင့်လည်း စာနယ်ဇင်းလောကနာမည်ပျက်စာရင်းက ပိုဆိုးရွားနေတာပါ။ နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက ခုလို ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရာမှာလည်း ဖြစ်တဲ့နေရာက ဘီယာဆိုင်လို့သိရပါတယ်။ အဲလိုဆိုင်မျိုးမှာ အမျိုးသမီးလေးတွေကို လုပ်ခိုင်းစေခြင်းကလည်း အဲလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုသိဖို့လိုပါတယ်။ အရက်ဆိုင်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် လူကောင်းတွေအတွက်နေရာမဟုတ်ပါဘူး။ (မှတ်ချက်။ ။ လူကောင်းဟု သုံးနှုန်းခြင်းသည် ယင်းဆိုင်တွင်း ရှိသူများသည် အရက်လာသောက်သူများဖြစ်သည့်အတွက် အရက်၏စွမ်းအားကြောင့် အရက်ဝင်လို့ စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ သာမန်လူတစ်ယောက်၏ ထိန်းချုပ်မှု အနေအထားမရှိခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်)အဲဒီ့အတွက် ခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာ မိမိကုန်ပစ္စည်း ရောင်းအားမြင့်တက်ရေး Promotion ပြုလုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကလည်း ယခုကဲ့သို့ ပြဿနာများကို ကြိုတင်သိရှိထားရမှာဖြစ်သလို ရောင်းချသည့်ဆိုင်အနေနဲ့ကလည်း အရက်ဆိုင်နှင့် မိန်းကလေးတွဲဖက်လာတဲ့အခါမှာ မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုသိထား၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ အထူးလိုပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချုပ်ပြောရရင်တော့ အားလုံးမှားသည်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။